16 / 07 / 2021 17 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 481 Views စာ0မှတ်ချက် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Clone Trooper တပ်မှူး, တပ်မှူး Cody, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, Hans Burkhard Schlömer, Jedi Bob, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego Minifigures, Lego Star Wars, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, တင်းပုတ် Windu, သေးသေးလေး, prequel trilogy ပာ, သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Star Wars, Star Wars prequel trilogy ပာ, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, UCS သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
အဆိုပါ Lego Star Wars ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကပြောကြားရာတွင် prequel trilogy ပာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုစုံလင်သောပရိသတ်များ ၀ ယ်ပါကလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship.
လူ ၂၀ ကျော် မဲဆန္ဒ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသုံးလမ်းပါ Ideas မဲအားလုံး၏ ၅၈% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်သိသာထင်ရှားသည့်ကွာခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောမော်ဒယ်ကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံမှုတွင်ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါကမကြာမီ prequels များကိုအခြေခံသည့် Ultimate Collector Series အစုံများကိုမမြင်ရပါ။
ဒါကထံမှမက်ဆေ့ခ်ျကိုပါပဲ Lego Star Wars ဒီဇိုင်းပညာရှင် Hans Burkhard Schlömerကပြောကြားခဲ့သည် Brick Fanatics ယင်းကြောင့် Lego Group သည်မဲပေးခဲ့သည့်တူညီသောပရိသတ်များအပေါ်တွင်ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship လာမယ့်လမှာဖွင့်တဲ့အခါမှာထွက်သွားဝယ်။
“ ၀ ယ်လိုအားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါပြောချင်တာကမင်းတို့က 'ငါတို့ဒါကိုလိုချင်တယ်၊ အဲဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကြီးထွားချင်တယ်' လို့ပြောခဲ့တာပဲ၊ ငါမဟုတ်ဘူး၊ ငါအသေးစားဓာတ်ပုံတွေကိုမကြိုက်ဘူး၊ 'ငါမဟုတ်ဘူး။ ငါအဲဒီအုတ်ကိုမကြိုက်လို့ဝယ်လိုက်တာ။ ' ဒီတော့ဟုတ်တယ်၊ မင်းဒီလိုမျိုးစုံတွေကိုမြင်ချင်ရင်ဝယ်ပြီးဝယ်လိုက်စမ်းပါ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဆုံး prequel trilogy ကိုယူထားသည့် UCS ကိုလက်ခံခြင်းသည်အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအကြားတော်တော်လေးကွဲပြားနေသည်။ အသိုင်းအဝိုင်းအချို့မှသုံးစွဲသူများထံမှ Gunship ကိုကျွန်ုပ်တို့များစွာတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် (redditဥပမာ၊ ) သို့သော်ဤဖိုရမ်များတွင်အခြားသူများကိုလည်း minifigure ရွေးချယ်ခြင်းကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြိုခွဲသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၃,၂၉၂ အပိုင်းအစပုံစံတွင် Mace Windu နှင့်အမည်မဖော်သော Clone Trooper Commander တို့ပါ ၀ င်ပြီးလူအများကအသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Jedi Bob သို့မဟုတ် Commander Cody ကိုတောင်းဆိုနေကြသည်။
ထိုက်တန်သောအရာအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် 'ဒီဟာအသေးစားဓာတ်ပုံများအတွက်သင်ဝယ်ယူထားသောအရာမဟုတ်ပါ၊ ' prequel trilogyal မော်တော်ယာဉ်များကိုနှစ်သက်သူများကကျေနပ်မှုထက်ပိုရမည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship. ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအပြည့်အစုံကိုဖတ်ရန်၊ အကယ်၍ သင်က Jedi Bob အတွက်နေတုန်းပဲလား ဒီမှာအမြန်လမ်းညွှန်ပါ ရှိပြီးသားအပိုင်းပိုင်းကနေခေတ်သစ်ဗားရှင်းဖန်တီးခြင်းရန်။
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship ဖွင့်ပါလိမ့်မယ် LEGO.com နှင့် Lego သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတိုးဆိုင်များထိုအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုခြင်း (အချိန်ကြွလာသောအခါ) သင်၏ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပြု တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← LEGO Harry Potter 76394 Fawkes, Dumbledore ၏ Phoenix ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - တူညီသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်
LEGO ပရိသတ်များအားပြောဆိုခြင်းသည် YouTube ပရိသတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် →